AKỤKỌ BANYERE NTỌHAPỤ NKE WINDOWS 10 - WINDOWS - 2020
Akụkọ banyere ntọhapụ nke Windows 10
N'ime izu gara aga, ọtụtụ ozi dị mkpa pụtara banyere ntọhapụ nke OS ọhụrụ na nwelite na Windows 10. N'otu oge ahụ, ozi gbasara usoro melite na ọdịiche dị na Windows 10 gosipụtara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akwụkwọ nile nke asụsụ Russian, na nke abụọ dị mkpa, n'echiche m, nkọwa, ihe mere A kpọghị aha ahụ (maka ha - na ederede).
Iji malite, M na-achọpụta na ihe m dere na mbụ Ị ga - esi nweta ikikere Windows 10 maka n'efu, mgbe a gbazigharịrị na bọtịnụ Microsoft, abaghị uru (naanị onye nwere ụdị ikikere nke usoro a nwere ike ịnweta ikikere n'ụzọ dị otú a). Na nchịkwa System nke Windows 10 isiokwu, ịnwere ike ịchọta ozi banyere ụdị ntụgharị dịgasị iche nke Windows 7 na 8.1 ga-emeghere na Windows 10.
Ụdị Ntugharị na Usoro Ndozi
Microsoft ebipụtala na ebe nrụọrụ weebụ ya na tebụl dị iche iche dị na Windows 10 - Home, Pro, Enterprise, na Education (enwere nsogbu ndị ọzọ, mana ha anaghị ezube iji ya na desktọọpụ, mbadamba ma ọ bụ laptọọpụ).
Ị nwere ike ịlele tebụl na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị. Na nkenke, ọdịiche dị na arụmọrụ achọrọ n'etiti mbipute Windows 8.1 na mmemme Windows 10 ndị kwekọrọ na ya dị ntakịrị, ọ bụghị ịgụpụta mbipụta Windows 10 Education dị iche iche maka ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ, nke gụnyere atụmatụ mbipụta Enterprise (mgbe ị na-ahụ ihe dị iche " Ntọhapụ ụlọ na Education ").
Ihe mbụ dị mkpa: Dị ka ozi Zdnet si edepụta ya site na isi mmalite ya, na Windows 10 Home, onye ọrụ ahụ agaghị enwe ike igbanyụọ, kwụsị ma ọ bụ gbanwee nrụnye nke mmelite usoro (Ma na nke a, echere m na ọ bụghị ịtụ ụjọ banyere - anyị ga-ahụ ohere a).
Banyere usoro nke melite Windows 10, Microsoft na-akọ na ọ ga-agbanye na July 29, ma ọ bụghị kọmputa nile ga-enwe ike ịnweta mmelite n'otu oge (yiri ọdịdị nke "Reserve Windows 10" na mpaghara ngosi, nke na-apụtaghị n'otu oge maka onye ọ bụla). N'okwu a, nwelite mbụ ga-enweta ndị òtù Windows 10 Insider Programme. Site n'August, A ga-erere nsụgharị na kọmputa na Windows 10 nke a ga-ere.
Oge igbu oge na ịnweta mmelite nwere ike ịda na nghazi ngwanrọ na ngwanrọ na kọmpụta, Otú ọ dị, a na-akọ na enwere ike idozi melite ahụ ọbụlagodi na nsogbu dị otú ahụ dị.
Rollback na Windows 10 nanị maka ụbọchị 30?
Nke a bụ ihe nke abụọ dị mkpa nke m na-ezuteghị n'asụsụ Russian, mana m gụrụ ya na ndị Europe: Ndị ọrụ nke kwalite Windows 7 na 8.1 na Windows 10 ga-enwe naanị 30 ụbọchị iji laghachi na mbipute mbụ nke usoro ahụ. .
Dị ka akwụkwọ ndị ahụ si kwuo, mgbe ụbọchị 30 gasịrị, ikikere gara aga "ga-agbanwe" na ikikere Windows 10 ma enweghị ike iji ya ọzọ iji wụnye Windows ochie ahụ.
Amaghị m ihe ọmụma ahụ bụ eziokwu (ebe a ị ga-achọ iji nlezianya gụọ nkwekọrịta ikikere mgbe ị na-emelite), mana ị kwesịrị ịṅa ntị na ya, nke mere na emesịa ọ gaghị abịa dịka ihe ijuanya. Ma, n'ozuzu, echere m na nkọwa ahụ yiri ka ọ bụ - mgbe niile, ọbụnadị echiche m snoaked after upgrading my Windows 8.1 Pro (Retail) na Windows 10 Pro, wụnye Windows 8.1 na kọmputa ọzọ, na n'okpuru ọnọdụ ndị a ọ na-esi ike.